Xubno ka tirsan shaqaalaha barlamaanka oo ka soo hormuuqday maxkamad ku taal magaalada nairobi | Risala FM-The Voice of Horn Africa
Xubno ka tirsan shaqaalaha barlamaanka oo ka soo hormuuqday maxkamad ku taal magaalada nairobi
Xubno ka tirsan shaqaalaha barlamaanka dalka ayaa ka soo hormuuqday maxkamada ku taal magaalada nairobi ee caasimad dalka kuwaasi oo lagu eedeynayo in ay si aan sharciga aheyn lacago fara badan uga luinsadeen aqalka barlamaanka dalka.
Todobaadan xubnood oo magacyadooda lagu sheegay Samuel Obudo, Mary Kanyiha, Keith Kisinguh, Aloys Tinega, David Kithua, George Arun and Benjamin Kagutu ayaa waxaa ay beeniyeen danbiga lagu soo oogay oo ah in ay lunsaden lacag cadadeeda lagu sheegay 70 milyan oo shilinka dalka.
Edeysanayaashaan ayaa lagun sii daayay lacag dhan 1 million oo shilinka dalka kadib markii uu amray qaadiga maxkamada Chief Magistrate Daniel Ogembo.
Kiiskaan ayaa dib loo dhageysan doonaa 26th January oo ku beegan horaanta sanada soo aadan ee 2016-ka sida ay maxkamadu amartay.
Arintaan ayaa imaaneysa iyadoo dalka uu ka taagan yahay qalqal aad u baahsan iyadoo dadka kenyanka ah ay rajo xumo ka muujiyeen musuq maasuqa lagu eedeynayo madaxda ay doorteen.
Wasiirada hormarinta iyo dowlad wadaajinta dalka ms ann waiguru ayaa wajaheysa falal lunsi ah iyo wax si daba marin iyadoo ay haatan maqantahay lacag tiradeeda lagu sheegay 712 million,oo qansanada wasaarada lagala baxay tan iyo intii xilkaasi uu madaxweyanah u magcabay.